သူမ Virgo ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီနေ့ 1st Of September | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Events/Fundraise » သူမ Virgo ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီနေ့ 1st Of September	21
Posted by မြစပဲရိုး on Sep 1, 2015 in Events/Fundraise | 21 comments
ချစ်လှစွာသော “သူမ လေး” ရဲ့ ဒီနေ့ကျရောက် တဲ့ မွေးနေ့ မှ သည်
* နေ့ရက်ပေါင်းများစွာ ဖြင့် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်စေသောဝ်။
မြစပဲရိုး says: ဦးဏှောက် မှတ်ဉာဏ် သိပ် မပျက်သေးဘူး လို့ ထင်တာပါဘဲ။
A Very Happy Birthday My Dearest KZ Lay! :-))
ဇီဇီခင်ဇော် says: I mabit shocked that u still remember the date even though you are not at FB. I love u so much, A Yee. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Cos you are so special to me.
The reminder told me this morning but I was so busy and couldn’t manage my time. :-))
ဇီဇီခင်ဇော် says: I m so touched to see this post.
Thank you for your wishes, loves and cares.
I love you, too. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒီနေ့ မွေးနေ့ မှန်တယ်ပေါ့။ :-))
ဇီဇီခင်ဇော် says: Yeah..
1st day of Sep. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဟိုတစ်နေ့ က မောင် အောင် ရဲ့ Post မှာ မြင်လိုက်ပြီး reminder လုပ်ခဲ့တာ။ :-))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျော် ကိုယ် ချစ်တဲ့ သူတွေတိုင်းး အတွက် အမှတ်တရ ပို့စ်တွေ ရေးးဖူးးတယ်.. ကိုယ့်ချစ်ခြင်းကို ဒီလို ပြတတ်တာမို့ပါ.. ၂၀၁၃ မှာ နေခြည့်ဆီက
၂၀၁၅ မှာ အရီးးဆီက မှတ်မှတ်ရရ ပြန်ရတယ်..
ဒီနှစ်အတွက် အချစ်ဆုံးး လက်ဆေယင်ပါ အရီးးရေ… https://www.facebook.com/photo.php?fbid=647995161891810&set=a.609549749069685.1073741828.100000439972920&type=1
နေခြည်ရေးပေးးဖူးးတာလေးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: နေခြည် ရေးတာလေး က မွေးနေ့ရှင်ရဲ့ ပုံစံ နဲ့ စရိုက် ကို မျက်စီထဲ မြင်လောက်အောင်ကို အတော်ပေါ်လွင်စေတာ။ ချစ်ဖို့ကောင်းသူဝတ်တော့ အဆင်စပ် စကပ် တောင်မှ အတော် စတိုင်ကျ သဗျား။
ငယ်တုန်းက စပ်ထမီ လေး သတိရပြီး အဲဒီ စကပ် ရာဇဝင် ကိုတောင် စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီ စကပ် ရာဇဝင်က စကော့ဈေးက ဝယ်တာလေ။
အပြင်မှာ သိပ်မလှပေမဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ရည်ရွယ်လို့ ဝယ်ထားတာ။
kai says: ဆွိမမက.. အ၀တ်စပိစိ …ပေါက်စတွေဆက်ထားတဲ့အဆင်ကြီးနဲ့ပေါ့..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပေးးတဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်ပါရစေ
အဲဒီ ပုံ မြသ်တိုင်းး အဲ စကပ်ကိူပဲ ပြောကြတယ်..
မြစပဲရိုး says: သူကြီး မင်း ပါးစပ်ထဲ ရှိရာ လျှောက်ပြော တဲ့ “အစတွေဆက်ပြီး.. လှနိုင်ပါစေ…” ဆိုတာ ကို “ပေးးတဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်ပါရစေ” တဲ့။
အဲဒီလိုအစ ဆက် တာ လက်တွေ့ ဘဝ မှာ ဘယ်လိုမျိုး တုန်း။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: မသိဘူးလေ။
ဘာပြေါပြေါ သူ ဆုပေးဖို့ ဆုတောင်းပေးဖို့ ဆိုတာ ခဲယင်းဘိဂျင်းးးးး
ရတုန်း ဘာ အစစဖြစ်ဖြစ် ယူထားမှ။
Mike says: .FB မှာတော့ဆုတောင်းပေးပြီးပါပြီ…ဒီမှာတော့
.အမြန်ဆုံးစွံ ဆွိဖြစ်ပါစေလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဦးကြောင်ကြီး says: -လူမော်ခင်ဇိုက်
-သူပျော်လျင်ကိုက်
ဇီဇီခင်ဇော် says: သများ ဂု လိမ်မာနေပါပြီ ဥကြောင်
Ma Ei says: ဒီပို့စ်ကို ကျော်ဖတ်မိလို့ ခွင့်လွှတ်ဖို့ အရင်ပြောပါ့စေ……………..
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာ ပါစေလို့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပို့လိုက်ပါတယ်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရပါတယ် မွအိရေ။
Wow says: အနော်လဲ စက်တင်ဘာ ၉ ဗာဂို….
ဗာဂိုတွေ စရိုက်ကလဲ မှန်မှမှန် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.